POP - စာရွက်ပေါ်တွင်ရှေ့ပြေးပုံစံရေးဆွဲခြင်းအတွက်သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း | Martech Zone
wireframes နဲ့ layout user interface element တွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ prototyping tools တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းစာရွက်ကိုပြန်ဆွဲခဲ့တယ်။ ငါဝယ်ယူလျှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ပုံကြမ်း padငါအချို့ကံရှိနိုင်တယ်လို့သူက (သေး) drawing မှကြွလာသောအခါ ... ကိုယ့်တစ်ဦး mouse ကိုကောင်လေးမဟုတ်ဘူး။ ရိုက်ထည့်ပါ POP ကိုအသုံးပြုသူအားသင်၏စက္ကူရှေ့ပြေးပုံစံဓါတ်ပုံများကိုဟော့စပေါ့များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အက်ပလီကေးရှင်း။ ဒါဟာတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်လိမ္မာပဲ!
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောလင့်ခ်များကို စုစည်း၍ ထည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့စက္ကူပေါ်တွင်ရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်ကိုမြင်ယောင်ရန်ဖောက်သည်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကဖြစ်ပျက်အောင်များအတွက်တောက်ပ application ဖြစ်ပါတယ်! ကနေ download iTunes က or Google Play စ.
ထုတ်ဖော်: ဒါကပုံကြမ်း pad ပါတစ်ခု Affiliate link ကိုဖွင့်!
Tags: စီမန်ကိန်းမိုဘိုင်း appစက္ကူပေါ့ပ်ရှေ့ပြေးပုံစံuiအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုuser interface ကိုux